Ukudibanisa imbali kunye neBhayi- bhile ngoBukumkani baseAsiriya.
Kukhuselekile ukutsho ukuba ininzi amaKristu efunda iBhayibhile ikholelwa ukuba ichanile imbali. Iintsingiselo, amaninzi amaKristu akholelwa ukuba iBhayibhile iyinyaniso, ngoko ke bayayibona into ethethwa yiZibhalo ngembali yokuba yinyani ngokwenene.
Kwinqanaba elincinci, ke, ndicinga ukuba amaKristu amaninzi aziva ukuba kufuneka akhombise ukholo xa ebanga ukuba iBhayibhile ichanekile ngokusemthethweni. AmaKristu anjalo anengqiqo yokuba iziganeko eziqulethwe kwiLizwi likaThixo zihluke kakhulu kuneziganeko eziqulethwe kwiincwadi zeencwadi zephondo kunye nokukhuthazwa yiingcali zembali ehlabathini lonke.
Iindaba ezilungileyo kukuba akukho nto inokuthi ibuye ivela kwi nyaniso. Ndikhetha ukukholelwa ukuba iBhayibhile ibhalwe ngokuchanekileyo nje nje ngomcimbi wokholo, kodwa kuba ihambelana ngokumangalisayo nangemicimbi yeziganeko eziyaziwayo. Ngamanye amazwi, akufuneki ukuba sikhethe ukungabi nolwazi ngokuzithandela ukuze sikholwe ukuba abantu, iindawo kunye neziganeko ezibhalwe eBhayibhileni ziyinyaniso.
Ubukhosi baseAsiriya bunika umzekelo omkhulu wento endithetha ngayo.
Ubukhosi baseAsiriya busekuqaleni busekwe yinkosi yamaSemitic ogama linguTiglath-Pileser owayehlala ngo-1116 ukuya ku-1078 BC AbaAsiriya babengamandla amancinci kwiminyaka yokuqala eyi-200 njengesizwe.
Malunga no-745 BC, nangona kunjalo, amaAsiriya alawulwa ngumlawuli ogama lakhe linguTiglath-Pileser III. Le ndoda yamanyanisa abantu baseAsiriya kwaye yaqalisa iqela eliphumelelayo lempi. Kule minyaka, iTiglath-Pileser III yabona imikhosi yakhe yokulwa neqela lemiphakathi enkulu, kuquka nabaseBhabhiloni nabaseSamariya.
Ekugqibeleni kwayo, ubukhosi baseAsiriya bendlulela ngaphesheya kwePersian Gulf ukuya eArmenia ngasenyakatho, uLwandle lweMeditera entshonalanga, ukuya eYiputa ngasezantsi. Umzi-dolophu walo mbuso omkhulu wawuyiNineve - iNineve efanayo uThixo wamyalela uYona ukuba ahambele ngaphambi nangemva kokugonywa ngumnxeba.
Izinto zaqala ukuphazamiseka kumaAsiriya emva ko-700 BC Ngowe-626, amaBhabhiloni ahlukana nolawulo lwama-Asiriya waza wazimisela ukuzimela njengabantu kwakhona. Phantse kwiminyaka eyi-14 kamva, umkhosi waseBhabhiloni wabhubhisa uNineva kwaye waphumelela ekupheleni koBukumkani baseAsiriya.
Esinye sezizathu esazi kakhulu ngeAsiriya kunye nabanye abantu bemihla yabo ngenxa yomntu ogama linguAsbanibanipali - ukumkani waseAsiriya omkhulu wokugcina. UAsbanibanipal udume ngokukwakha ilayibrari enkulu yamatyebhethi wedongwe (eyaziwa ngokuba yi-cuneiform) kwisixeko esikhulu saseNineve. Zininzi zala macwecwe ziye zasinda kwaye ziyafumaneka kubaphengululi namhlanje.
IBhayibhile ibandakanya iziganeko ezininzi kubantu baseAsiriya ngaphakathi kwiphepha leTestamente elidala. Kwaye, ngokugqithiseleyo, ezininzi zezi ngxelo ziqinisekisiwe kwaye zivumelane namaqiniso anezembali. Okona kuncinci, akukho mabango eBhayibhile malunga namaAsiriya aphikisiwe ngumfundi othembekileyo.
Iminyaka yokuqala engama-200 yoBukumkani baseAsiriya ihambelana ngokubanzi kunye nookumkani bokuqala bamaYuda, kuquka uDavide noSolomon. Njengoko abaseAsiriya bafumana amandla kunye nempembelelo kuloo mmandla, baba ngumsebenzi omkhulu kumxholo weBhayibhile.
Iingxelo ezibalulekileyo zeBhayibhile kwiAsiriya zijongene nomkhosi wamajoni kaTiglath-Pileser III. Ngokukodwa, wabakhokela abaseAsiriya ukuba banqobe kwaye bafanise iintlanga ezili-10 zakwaSirayeli ezahlula uhlanga lwaYuda kwaye zakha uMbuso waseMzantsi. Konke oku kwenzeke ngokuthe ngcembe, kunye nookumkani bakwaSirayeli ngokunyanzela ukuba banyanzeliswe ukuba bahlawule iAsiriya njengezithunywa kunye nokuzama ukuvukela.
Incwadi ye-2 Kumkani ichaza intsebenziswano eninzi phakathi kwamaSirayeli kunye namaAsiriya, kuquka:
Ngeli xesha likaPeka ukumkani wakwaSirayeli, uTiglati-Pileser ukumkani waseAsiriya waya, wathabatha iIyon, neAbheli-bhe-mahaka, neYanowa, neKedeshe neHatsore. Wathabatha iGiliyadi nelaseGalili, kunye nelizwe lonke lakwaNafetali, wabathumba abantu eAsiriya.
2 Kumkani 15:29
7 UAhazi wathuma abathunywa ukuba athi kuTiglati-Pilesere, ukumkani waseAsiriya, Ndingumkhonzi wakho, Yenyuka, undisindise esandleni sakwa-Aram nookumkani wakwaSirayeli, abandihlaselayo. " 8 UAhazi wathabatha isilivere negolide efunyenwe etempileni yeNkosi, nakubuncwane bendlu yobukumkani. waza wayithumela njengesipho ekosini yaseAsiriya. 9 Inkosi yaseAsiriya yavumelana ngokuhlasela iDamaseko nokuyithatha. Wathumba abemi bawo eKiri waza wambulala uRetsin.
2 Kumkani 16: 7-9
3 U- Shalmaneser ukumkani waseAsiriya wenyuka waya kuhlasela uHosheya, owayengumgcini kaShalmaneser, wamhlawula. 4 Kodwa ukumkani waseAsiriya wafumanisa ukuba uHosheya ungumngcatsha, kuba wathumela abathunywa kuye ukumkani waseYiputa; akayi kubuyiselwa ukumkani waseAsiriya, njengoko wayenze ngonyaka ngeminyaka. U-Shalmaneser wamthabatha wamfaka entolongweni. 5 Inkosi yaseAsiriya yahlasela ilizwe lonke, lahamba lahlasela iSamariya, laza lazingqinga iminyaka emithathu. 6 Ngomnyaka wesithoba kaHosheya, ukumkani waseAsiriya wayithatha iSamariya, wabathumba amaSirayeli eAsiriya. Wazibeka eHala, eGozan kuMlambo waseHabor nakwiidolophu zamaMede.
2 Kumkani 17: 3-6
Ngokubhekiselele kule ndinyana yokugqibela, uShalmaneser wayengunyana kaTiglath-Pileser III kwaye ngokugqibeleleyo wagqiba oko uyise ayekuqalisile ngokuwunqoba ngokuqinisekileyo ubukumkani bakwa-Israyeli obukumzantsi nokuxoshe amaSirayeli njengabathunjwa e-Asiriya.
Kukho konke, ama-Asiriya athatyathwa ngamaxesha amaninzi kwiZibhalo. Kwiimeko zonke, banikezela ubungqina bembali obunamandla bokuthembeka kweBhayibhile njengeLizwi lokwenyaniso likaThixo.
10 Amazwi NgamaMaya aseMandulo